🥇 ▷ WhatsApp waxay leedahay qashin u oggolaanaya haakarisku inay beddelaan farriimahaaga ✅
WhatsApp waxay leedahay qashin u oggolaanaya haakarisku inay beddelaan farriimahaaga
Check Pointn Research, oo ah shirkad internet ka isgaarsiinta oo ku taal Israel, ayaa ka heshay cillad ku jirta WhatsApp taas oo u oggolaaneysa haakarisku kombiyuutarka in ay fara-geliyaan oo ay u maareeyaan farriimaha, maareynta in la beddelo aqoonsiga soo diray ama beddela qoraalkiisa.
Shirkadda ayaa dib ulaabatay istiraatiijiyad sirta ah ee Whatsapp oo duub xogta. Mar alla markii uu sameeyay, wuu arki karayay dhamaan cabbiraadaha loo diro inta udhaxeysa websaydhka iyo nooca moobiilka ee appka wuxuuna adeegsan karaa xogtaan.
Dhamaadka sanadka 2018, Check Point Research wuxuu la socodsiiyay WhatsApp nuglaanta iyo nuglaanta cusub ee codsiga fariimaha caanka ah kaasoo u saamaxaya jilayaasha hanjabaada inay farageliyaan oo ay u maareeyaan farriimaha loo diray wadahadalada gaarka ah iyo kooxda, ayagoo siinaya kuwa weeraraya awooda inay abuuraan oo faafiyaan macluumaadka khaldan. Bayaanka ayaa u muuqda in ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay yihiin.
WhatsApp waxay leedahay in kabadan 1,500 milyan oo isticmaale waxaana loo isticmaalaa 180 wadan oo aduunka ah; Iskucelceliska adeegsigu wuxuu dib u eegaa barnaamijka 23 jeer maalintii. Sidaa darteed, suurtagalnimada khiyaanooyinka khadka tooska ah, wararka xanta ama wararka beenta ah waa kuwo aad u weyn.
Dadka baarista ku sameeya baarista ‘Check Point Research’ waxay heleen seddex dariiqo oo suurtagal oo weerar ah kuwaas oo ka faa’iideysanaya nuglaantaan WhatsApp, kuwaas oo ku lug leh xeeladaha injineernimada bulshada si ay u khiyaaneeyaan dadka isticmaala dhamaadka.
Seddexdan suuragal ayaa ah:
Adeegsiga waxqabadka “xigasho” ee wadahadal kooxeed si loo beddelo aqoonsiga dirayaha, xitaa haddii qofkaasi aanu xubin ka ahayn kooxda.
Wax ka beddel qoraalka qof kale jawaabtiisa, asal ahaan erayada afka geliyo.
U dir fariin khaas ah kaqeybgale kale ee kooxda oo isu dhiga inuu yahay fariin guud oo qofkasta leeyahay, sidaa darteed markii qofka bartilmaameedka ahi ka jawaabayo, waa mid u muuqda qof walba wada hadalka.
Iyada oo Facebook uu qaaday tallaabada arrinta isla markaana uu xalliyey dhibaatadii karti-jabku u lahaa inuu farriin gaar ah u diro kaqeybgale kale oo kooxda isu muujiya inuu yahay farriin dadweyne, Check Point wuxuu ku adkaysanayaa in labada nugul ee kale aan weli la xallin.
Waxaan aaminsanahay inay tahay waajibkayaga inaan kor u qaadno tan, ayuu yiri Oded Vanunu, oo ah madaxa cilmi-baarista nuglaanta badeecada ee Check Point Research.